यी हुन् माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरू: हेर्नुस् फाइनल नेमलिस्ट ! - News 88 Post
यी हुन् माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरू: हेर्नुस् फाइनल नेमलिस्ट !
September 24, 2021 September 24, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरू: हेर्नुस् फाइनल नेमलिस्ट !
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने र मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने तयारी भैरहेको बताइएको छ । सरकारमा मन्त्रीहरू थप्नको लागि सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा समेत टुंगो लगाएको छ ।
सरकारमा केहि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ । गठबन्धनले गरेका पछिल्ला छलफलहरूमा केहि कानुन व्यवसायीको बारेमा चर्चा हुने गरेको बताइएको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको सूचीबारे छलफल सुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम लिस्ट खल्तीमै बोकेको माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनले मन्त्री बनाउने बारेमा निकट नेताहरुसंग छलफल गरिसकेका छन् । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको जानकारी दिएका थिए । उनले बिहिबार भने मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने जानकारी बैठकमा दिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन बिहिबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्पापन विद्येयक ल्याउने तयारी गरेको छ । जसपाले अध्यादेश फिर्ता नलिंदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको थियो ।
जसका कारण सरकार बनेको ७० दिनभन्दा बढी हुंदा समेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले प्रतिस्पधान विद्येयक ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । दलहरुको बीचमा मन्त्रालयको भागवण्डा भने मिलिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने सहमती भएको छ । जसअनुसार माओवादीबाट अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्रीको रुपमा पम्फा भुसाल छन् ।
गठबन्धनको आजको बैठकमा मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने र बिहिवार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी छ । माओवादीको भोली बस्ने स्थायी समितिको बैठकले मन्त्रीहरुको नामावली टुंगो लगाउने बताइएको छ । तर कतिपय नेताहरूले भने अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री बन्नेहरूको लिस्ट नै बनाएको दाबी गरेआ छन् ।
माओवादी स्रोतकाअनुसार प्रचण्डले बनाएको लिस्टमा नेताहरु नारायणकाजी,श्रेष्ठ,हरिवोल गजुरेल,देवेन्द्र पौडेल, महेश्वर गहतराज, हरि चौधरी, सुदन किराती, अमनलाल मोदी र शशि श्रेष्ठ लगायतको नाम उल्लेख छ । अन्तिम समयमा प्रचण्डले यसबाट पाँच जनाको नाम छान्ने बताइएको छ ।
सन्दीप लामिछानेको अर्को ठूलो सफलता: आईसीसी र्‍याङ्किङमा छलाङ…
लडाकु शिविरको भ्रस्टाचार अब कानुनी प्रक्रियामा, अफ्ठ्यारोमा परे प्रचण्ड !
नेपाल समूहलाई बाक्लो दाल खान बास्कोटाको चेतावनी
June 7, 2021 N88
एमाले कार्यकर्ताले कोटेश्वरमा जलाए माधव नेपालको पुत्ला, नेपालकाे घरमै भेट्न गए प्रम देउवा
काठमाडौँ उपत्यकासहित १६ जिल्लामा निषेधाज्ञा, के खुल्छन्, के खुल्दैनन् (सूचीसहित)